CNC Machines Factory - China CNC Machina Vagadziri, Suppliers
2022 Yepamusoro Yakayerwa CNC Oscillat...
2022 Yakanakisa Budget CNC Router...
Kutengeswa kunopisa 3D 5 Axis Woodwork...
Jinan Factory Mutengo 3 Axis ...
Kutengesa Huni Door Kugadzira M...
1390 CO2 Laser Engraver ye...
APEX 1516 Imwe Axis CNC Matanda...
Panel Controller Imwe Axi...
2022 Yepamusoro Yakatemerwa CNC Inotenderedza Banga Kucheka Muchina Kutengeswa neMutengo Unodhura
CNC Oscillating Knife Cutter inonziwo CNC oscillating banga rekucheka muchina, iri yakakwira-chaiyo CNC Yekucheka Equipment yakashongedzerwa neakasiyana mapanga maturusi uye mashizha. kudhirowa, kubaya, kuronga, routing, etc. CNC oscillating banga rekucheka muchina unogona kushandiswa kune yega yega inochinjika kana yakapfava zvinhu zvine yakanakisa kucheka kuita.CNC Oscillating Knife Cutting Machine ine zvakanakira zvekumhanya zvakanyanya, kungwara kukuru, kutema chaiko uye kushanda kuri nyore, etc. CNC oscillating banga rekucheka muchina unogona kubatana nemamwe software zvakanaka nedata rekushandura software.CNC oscillating banga rekucheka muchina uchabatsira indasitiri kukwidziridza kubva pachinyakare bhuku sampling kune yepamusoro yekumhanya uye nemazvo ekugadzira maitiro.
2022 Yakanakisa Budget CNC Router ine Oscillating Banga Kucheka Sisitimu Yekutengesa
APEX1325 innovative CNC router uye banga sisitimu inosanganisa inorema-duty routing spindle nekukasira kucheka banga, APEX1325 yakakodzera kugadzirisa yakafararira yezvigadzirwa mumhando dzakawanda dzemaindasitiri ekugadzira.APEX1325 ndeyese mune imwe CNC muchina wakagadzirwa nespindle, oscillating banga uye CCD kamera seyakajairwa.Kuti ugadzirise huwandu hwakakura hwezvinhu nekurongeka, kuchinjika, kugadzirwa uye mhando, akawanda esarudzo anogona kugadzirwa, senge pneumatic banga, beveling banga, crease vhiri uye CCD inoona yekumisikidza system.Iyo oscillating banga yekucheka chishandiso chakakosha kumabhizinesi anoda kugadzirisa zvinhu zvinochinjika zvinosanganisira kuputira furo, foam core, gator foam, furo reEVA, marara epurasitiki uye makadhibhokisi.Zvishandiso izvi zvese zvinopa matambudziko kune echinyakare router kana banga maturusi, asi anocheka banga anocheka anoitendera kuti icheke nepakati pezvinhu izvi zviri nyore, ichiburitsa micheto yakachena isina kutsemuka.
Engraving machine uye woodworking lathe compound machine
1.Engraving machine uye woodworking lathe compound machine
2.Single axis kaviri banga, kukurumidza kwekugadzirisa kunokurumidza, uye chigadzirwa chekudya chekutsvaga chinowedzerwa kune lathe, iyo inowedzera zvakanyanya kuchengetedza kwemunhu kwevashandi.
3.Engraving machine uye lathe zvakabatanidzwa kuvandudza kushanda kwekushanda
Mashanu Axis Laser Kucheka Machine yeSurcigal Instruments
1. Simba rekushandisa: single-phase 220VAC 20A (main circuit breaker);tambo yemagetsi 10m×1
2. Mhepo yakamanikidzwa
Air pressure: 0.8Mpa;
Pipe dhayamita: 6mm yakakwirira yekumanikidza gasi pombi;
Zvimwe: Gasi rinofanira kunge risina mafuta uye rakaoma;
3. Ivhu rinotakura simba i800Kg/㎡;
4. Ambient tembiricha (℃) 25±5;
5. Ambient humidity (RH) 30%～70%RH (hapana condensation);
Fiber laser yekucheka muchina-compact, flatbed, musanganiswa uye chubhu yekucheka system
Fiber Laser Kucheka Machina - Compact, Flatbed, Combination uye Tube Cutting Systems.
Yemhando yepamusoro, inodhura maindasitiri simbi yekucheka Fiber Lasers, ine yedu yakakura maindasitiri laser ruzivo uye inokwanisika mhando yekucheka masisitimu, APEX ndiyo yakakwana muchina mubatsiri pane zvese zvaunoda.Imwe neimwe yemamodhi edu efiber laser akakodzera kune akasiyana siyana emaindasitiri ekushandisa uye zvigadzirwa.
Yedu Fiber Lasers inotengeka uye ine mitengo yemakwikwi, yakaiswa nechikwata chedu chemainjiniya emunyika yese uye ane ruzivo rwakanyanya.Isu takaisa akawanda simbi yekucheka fiber laser michina munzvimbo dzakakura senge general engineering, kugadzira zvigadzirwa, mayunivhesiti, aerospace, mota, vanhu vanogadzira zvipo, vanogadzira, vanogadzira masaini uye nezvimwe zvakawanda.Kucheka chaiko kwesimbi hakuna kumbobvira kwave nyore kana kukwanisika.
Ese edu maFiber Lasers anouya akazara neWindows PC based masisitimu anokupa kutonga kwakazara pamusoro pekushanda kwemuchina wako, mukuwedzera kuWindows unowanawo isina waya pendant controller kuti ishandise mabasa efiber laser yako.Chero rudzi rweFiber Laser yauri kutsvaga isu tine sarudzo yaizoenderana nebhizinesi rako.
APEX1390 faibha laser yekucheka muchina
1.1000 Watts fiber laser metal cutting machine inotora Raycus 1000 Watts laser device (sarudzo: IPG) nekushanda kwakagadzikana, zvikamu zvakakosha zvinogona kusvika maawa 100,000;
2. Advanced CNC control system, inogona kuverenga .ai, .plt, .dxf, .lxd uye ug code zvakananga, nyore kushanda;
3. Intelligent yekucheka musoro ine inokwanisa otomatiki kureba kugadzirisa kuchengetedza nguva dzose yakatarisa kureba uye yakagadzikana yekucheka mhando;
4. Inotengeswa kunze kwepamusoro chaiyo yekufambisa mudziyo iyo inoshanda zvakakwana ne servo system, saka inogona kuita chokwadi chekucheka nemazvo uye kunyatsoshanda.
China CNC Gadzira faibha laser yekucheka muchina wesimbi
(1).Yakanyanya kuomarara inorema chassis, ichidzikisa vibration inogadzirwa panguva yekumhanya-mhanya yekucheka maitiro.
(2).Gantry yakapetwa kaviri dhiraivha chimiro, ine kunze kwenyika Germany rack & giya rekufambisa sisitimu, inovandudza kugadzirwa kwakanaka.
(3).Yepamusoro-inoshanda yakakanda aluminium gwara renjanji, mushure meaalysis isingaperi, inomhanyisa iyo cicular arc yekucheka kumhanya.
(4).Yakanyanya kurongeka, kukurumidza kukurumidza, yakamanikana kutsemuka, kushoma kupisa kwakakanganisika nzvimbo, yakatsetseka yekucheka nzvimbo uye isina burr.
(5).Iyo laser yekucheka musoro haina kusangana nepamusoro pezvinhu uye haikwenye iyo workpiece.
(6).Iyo yakatsemuka ndiyo yakatetepa, iyo inopisa yakakanganiswa nzvimbo ndiyo idiki, deformation yenzvimbo yeworkpiece idiki kwazvo, uye hapana mechanical deformation.
(7).Iyo ine yakanaka yekugadzirisa inoshanduka, inogona kugadzirisa chero pateni, uye inogona kucheka pombi uye mamwe maprofile.
(8).Kuchekwa kusingaderedzeke kunogona kuitwa pazvinhu zvehukukutu hupi zvahwo senge mahwendefa esimbi, simbi isina tsvina, mahwendefa ealuminium alloy, uye ma alloys akaomarara.
APEX1390 Diki saizi faibha laser yekucheka muchina weStainless Sheet
(1) Yakanyanya kurongeka, kumhanya kwakanyanya, nhete yakatsemuka, kushoma kupisa kwakakanganiswa nzvimbo, yakatsetseka yekucheka nzvimbo isina burr.
(2)Non contact cutting,Musoro wekucheka welaser hauzobatane nepamusoro pezvinhu uye kukwenya iyo workpiece.
(3)Mutsero ndiwo wakamanikana,iyo inopisa yakakanganiswa nzvimbo ndiyo idiki, deformation yemunharaunda ye workpiece idiki kwazvo, uye hapana mechanical deformation.
(4)Flexible processing, inogona kugadzirisa magiraidhi akasarudzika, inogona zvakare kucheka pombi uye mamwe maprofile.
(5)Inokodzera zvinhu zvakasiyana siyana,Inogona kucheka ndiro yesimbi, simbi isina tsvina, aluminium alloy plate, simende carbide uye zvimwe zvinhu nekuomarara chero pasina deformation.
4000W Yakakwira Precision Metal Fiber Laser Yekucheka Muchina weStainless Aluminium Steel Sheet
Zvimiro zvefiber laser yekucheka muchina #Advance mbiri yekutyaira system chimiro, Dual kutyaira simba kubva yakakwira chaiyo yekutyaira nzira.3 Yepamusoro giya giya, rack uye gwara renjanji, hapana chinodiwa chekugadzirisa, kumhanya kwakanyanya uye kushanda nesimba.#Zvikamu kubva kune vane mukurumbira pasirese vatengesi, Panasonic, Yaskawa, YYC, Simens, Precite, nezvimwe.#Nzvimbo yekushanda svikiro, vheneka kukuvadza kwemwaranzi.Ita shuwa kuti yakasvibira uye yakachengeteka mamiriro ekushanda.Kuvimbiswa kwehutano, waranti yakareba.siyana garandi chirongwa kuti iwe usarudze.#Professor...
China CNC Kugadzira 1390 1000w fiber laser yekucheka muchina wesimbi
Fiber Laser Kucheka Machine huru maficha:
China CNC Manufacture 1325 Pneumatic Air Kutonhodza 4 Spindles Automatic Wood Carving Machine
Feature: APEX1325ATC CNC router muchina unotora otomatiki chishandiso chekuchinja spindle ine chishandiso magazini ye12 cutters, maturusi anogona kungochinja kuti akwane mabasa akasiyana zvinoenderana nezvaunoda.Muchina weATC CNC unonyanya kushandiswa kugadzira 2D/3D kugadzira matanda, kugadzira kabati, kugadzira magonhi, kugadzira mold, hunyanzvi hwehuni, huni.Iye zvino yakanakisa ATC CNC router inotengeswa nemutengo wemutengo.ATC inoreva otomatiki Tool Changer.ATC CNC router imhando yemuchina weCNC une otomatiki chishandiso chekuchinja...
Yakanaka Hunhu DISC ATC CNC Router Wood Engraving Machine Atc CNC Yekucheka Muchina
Nhanganyaya: APEX1325 ATC CNC Router inogadzirwa pachishandiswa nzira dzepasi rose dzepasi rose nehuinjiniya hwepamusoro, magadzirirwo uye akavakwa kuti agare aine ese masimbi ekuvaka uye emhando yepamusoro senge mabheji emitsara nemarairi.Zvinhu zvakakosha ndeye 9KW (12HP) yakakwira frequency otomatiki chishandiso chekushandura spindle ine 8-chinzvimbo chishandiso rack, pneumatically retractable vacuum hood uye akawanda-zone vacuum t-slot tafura.Iyo sisitimu inosanganisira Servo mota uye zvinodzora ine Taiwan indasitiri L ...